China Yaskawa Motoman Gp7 Ukuphatha Robot mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
Oomatshini bokushicilela beYaskawa IMOTOMAN-GP7Irobhothi encinci-encinci yokuphathwa ngokubanzi, enokuhlangabezana neemfuno zoluhlu olubanzi lwabasebenzisi, ezinje ngokubamba, ukushumeka, ukudibanisa, ukugaya, kunye nokulungisa iindawo ezininzi. Inomthwalo omkhulu we-7KG kunye nobude obuthe tyaba obuyi-927mm.
Oomatshini bokushicilela beYaskawa IMOTOMAN-GP7 yirobhothi encinci yokwenza izinto ngokubanzi, ezinokuthi zihlangabezane neemfuno zabasebenzisi abaninzi, ezinje ngokubamba, ukushumeka, ukudibanisa, ukugaya nokwenza izinto ezininzi. Inomthwalo omkhulu we-7KG kunye nobude obuthe tyaba obuyi-927mm.
I-MOTOMAN-GP7 isebenzisa itekhnoloji yolawulo lwentshukumo yamva nje kwaye yamkela ubume bengalo engenanto, enokuthi ibandakanye izixhobo zokubona kunye nemibhobho yegesi ukunciphisa uphazamiseko phakathi kwengalo kunye nezixhobo zepheripherali. Isantya sokudibanisa simalunga ne-30% ephezulu kunemodeli yoqobo. , Qaphela ukuncitshiswa kwexesha lokucwangcisa, kuyiphucule kakhulu imveliso. Ukuhlaziywa kobume boomatshini kuqinisekisa ufakelo olumbeneyo kunye nokwandisa amandla okuphatha. Xa kuthelekiswa neemodeli zangaphambili, iphumelele ngesantya esiphezulu kunye nokuchaneka okuphezulu.
Inxalenye yesandla seMOTOMAN-GP7 ukuphatha irobhothiyamkela umgangatho we-IP67, ophucula ukusebenza kokuchasana nolwakhiwo lwemveliso, kwaye inokutsalwa iye ezantsi ehambelana nomphezulu wesiseko sendibaniselwano. Inkqubo ye-ukuphatha irobhothi I-GP7 inciphisa inani leentambo phakathi kwekhabhinethi yolawulo kunye nekhabhathi yolawulo, iphucula ukugcinwa ngelixa ibonelela ngezixhobo ezilula, ukunciphisa kakhulu ixesha lokutshintshwa kwentambo rhoqo kunye nokugcinwa ngokulula.
Ukuphatha iRobhothi Imifanekiso:
Indibaniselwano yeMOTOMAN-GP7 ukuphatha irobhothikunye ne-YRC1000micro yolawulo lwekhabhathi inokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zovolthi ezahlukeneyo kunye nokubalulwa kokhuseleko kwihlabathi liphela. Oku kuvumela i-GP irobhothi ukuba iphumeze eyona misebenzi ilungiselelwe kwaye iphumeze ngokwenyani eyona ntshukumo iphezulu emhlabeni. Isantya, ukuchaneka kwendlela, ukumelana nokusingqongileyo kunye nezinye izibonelelo.
Okulandelayo: Ukuphathwa kweRobhothi eyi-Yaskawa Motoman Gp8
Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphatha ingalo yeRobot,